Shaqooyin ka Bannaan Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeVACCANCIESShaqooyin ka Bannaan Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland
March 29, 2020 Puntland Mirror VACCANCIES 0
Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland waa Guddi dastuuri ah oo oo loo aasaasay hirgalinta hannaanka xisbiyada badan iyo qabashada doorasho qof iyo cod ah oo ka qabsoonta dhammaan deeganada Puntland. Hawlaha Guddiga loo xilsaaray qabashadooda waxaa ka mid ah:
Diiwaangelinta ururada siyaasadda
Diiwaangelinta muwaadiniinta xaqa uleh inay codeeyaan
Maaraynta iyo fulinta doorashada golayaasha deegaanka
Diiwaangelinta saddexda xisbi siyaasadeed ee ku soo baxa doorashada dawladadaha hoose
Ka dib dhismihii Guddigaan oo ah kii saddexaad, waxaa Guddigu meelmariyay qorshe istiraatiijiyadeed oo leh yoolal hagaya dhammaan hawlaha Guddiga. Qorshahaas oo lagusoo bandhigay dhammaan Gobolada Puntland waxaa lagama maarmaan ah in hirgalintiisa ay ka shaqeeyaan shaqaale leh aqoon iyo xirfad sare. Waa sababta aan usoo xayaysiinay shaqooyinkaan bannaan oo ah qaybta koowaad, si qof walba oo reer Puntland ay ugu suuragasho in uu usoo tartamo jagada uu leeyahay aqoonteeda iyo khibradeeda.
Agaasimaha Waaxda Doorashooyinka (1 boos)
Agaasimaha Waaxda Wacyigelinta iyo Tababarada (1 boos)
Guddoomiyayaasha Guddiga ee Gobolada Bari, Karkaar iyo Nugaal (3 boos)
Guddoomiyaasha Guddiga ee Degmooyinka Uffayn iyo Eyl (2 boos)
Halkan ka degso PDF
January 23, 2017 Shirkada isgaarsiinta Golis waxay raadinaysaa hal qof oo ah Operational Auditor iyo hal qof oo ah Database Administrator
July 29, 2017 36 shaqo oo ka banaan haayadaha dowladda Puntland
ISIS claims killing of former Qandala district commissioner in Bosaso
Garowe-(Puntland Mirror) The Islamic State militant group has claimed the responsibility for the killing of former Qandala district commissioner, according to a statement published by its Amaq news agency on Thursday. Jama Mohamed Khurshe, the [...]
GUDDOOMIYEYAAL AAN U QALMIN CAASIMADDA NABADDA
4-tii Abriil 2018 waxaa Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu digreeto ku kala diray golihii deegaanka degmada Garoowe, isaga oo u cuskaday isqabqabsi ka dhex jira golaha deegaanka. Inkastoo aysan bulshada reer Puntland [...]
Wasiirka Gaashaandhiga Talyaaniga oo yimid Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka Gaashaandhiga Talyaaniga Lorenzo Guerini ayaa maanta oo Talaado ah yimid magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Ujeedka safarka wasiirka ayaan weli la ogeyn, waxaase uu ku soo beegmay xilli Madaxweyne Farmaajo wakhtigiisii uu [...]